WARARKA BARAAWEPOST Arbaco 24 july 2013<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Sheekh Aadan Madeer oo maanta ka badbaaday qarrax lagu qaarijin lahaa
Gudoomiyaha guddiga maaliyada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Sheekh Adan Maxamed Madeer, ayaa maanta ka badbaaday isku day dil kadib markii gaari uu lahaa loogu xiray waxyaabaha qarxa isla markaana uu ku qarxay gudaha Suuqa Xamarweyne gaar ahaan dhanka Via Egitto barqanimadii maanta.
Wararka ayaa waxa ay intaa ku darayaan in gaariga uu qarxay kadib markii ay ka degeen Xildhibaan Sheekh Adan Maxamed Madeer iyo qof dumar ah oo la socotay taasoo sida ay wararku sheegayaan iyaduna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaaka hase yeeshe waxaa gaariga ku jiray ruux iyaga la socday kaas oo uu dhaawac kasoo gaaray qaraxa.
Gudoomiyaha Degmada Xamarweyne Cabdullahi Sahal Gar-dhuub, ayaa waxa uu sheegay in ay aaminsanyihiin in qaraxaasi uu ahaa mid horay gaariga loogu soo rakibay ama bac walxaha qarxa lagu soo guray oo ladhigay agagaarka gaariga maaddaama meesha lagu qarxiyay aysan aheyn goob god wax lagu aaso laga qodi karo.
Cabdullahi Gar-dhuub, gudoomiyaha degmada X/weyne ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan qaraxa si tafaasiil dheeraad ah ay uga helaan.
Xildhibaan Sheekh Adan Maxamed Madeer wali kama hadlin weerarka lagu qaaday iyo sida uu uga bad-baaday, waxaana goob joogayaashu sheegeen in durba markii qaruxu dhacay ay halkaasi soo gaareen ciidamo ka tirsan dowladda kuwaasoo markii dambe xildhibaanada goobtaas ka kaxeeyay.
Qarxaasi saaka ka dhacay suuqa xamarweyne ayaa inta la�ogyahay waxaa ku dhintay hal ruux halka toddoba kalana uu dhaawac kasoo gaaray kuwaas oo dhamaan la sheegayo in ay shacab ahaayeen.